Duqa Muqdisho oo u digay dadka dhul boobka wada - Awdinle Online
Duqa Muqdisho oo u digay dadka dhul boobka wada
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa kormeeray Darjiino ku yaala dhismaha taariikhiga ah ee Saciid Barkhash ee Degmada Shangaani oo maalmihii ugu danbeeyay uu ka jiray muran la xariira halkaasi.
Qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka Degmada Shangaani ayaa sheegay in halkan ay ahayd goob taariikhi ah oo lagu keydin jiray taariikhda Gobolka Banaadir, isla markaana ay saameysay bur burkii dalka ka dhacay, haatanna ay ku faraxsanyihiin in Maamulka Gobolka Banaadir uu dib u dhis ku sameynayo.
Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee Gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in qeybta howlaha guud ee gobolka ay gacanta ku heyso dhismahan, isla markaana aysan jirin cid lagu wareejiyay, waxaana ugu talagalnay inaan dib u dhisno.
Duqa magaalada Muqdisho oo maanta kormeeray dhismaha ka socda darjiinka Dowladda Hoose ee ku dhegan daarta Saciid Barqash ayaa sheegay in maamulka gobalka Banaadir uu gacanta ku hayo dhismaha, isagoo beeniyay wararka sheegaya in la boobayo dhulkaas.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa hoosta ka xariiqay in Maamulka Gobolka Banaadir uusan ogolaan doonin in goobaha danta guud ay sheegteen milkiyadeeda dad gaar ah.
“Goobtan waa Darjiino ka mid ah Darjiinooyinka dowladda Hoose ee Xamar, waxa ay ku dhagantahay daarta Saciid Barqash, waxaana haddda ka shaqeyneynaa inaan dhismo ku wareejino, si aan u muujino xarumaha dowladda Hoose ee Xamar” ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in maamulka Gobolka Banaadir uu qorsheynayo inay gacanta ku soo celiyaan dhamaan xarumihii dowladda Hoose ee Xamar, isla markaana ay noqon doonaan goobo bulshada wax loogu qabto.
Previous articleCiidamo si awood ah u xirtay mid kamid ah wadooyinka Muqdisho
Next articleKhasaaro ka dhashay qarax lala beegsaday Ciidamo ka tirsan Dowladda
RW Rooble oo Amar dul-dhigay Golihiisa Wasiirada
Maxkamadda Ciidamada oo dil ku fulisay Macalinkii dilaaga ee Ilkacase & Xubno kale
Laamaha Amniga oo gacanta ku dhigay Nin Caawa weerar ka geystay Muqdisho